वा र आमा दुबै भारतीय । तर यी युवतीको वर्ण ठ्याक्कै युरोपेली महिलाको जस्तो छ । उनी जन्मिदा खेरी नै त्यस्तै गोरी थिइन् ।हरियो आँखाका नानी, रातो कपाल, गोरो छाला । यी सबै विशेषताका कारण भारतको मुम्बइकी पूजा गणात्रा नामकी युवती निकै सुन्दर देखिन्छिन् । तर उनको यो सुन्दरमा वर्षौँदेखि उनको सत्रु बनिरहेको छ ।
भारतीय बुवाआमाकी यी छोरी शुद्ध भारतीय वंशकी हुन् । तर उनलाई देख्नेहरुले विदेशी भन्छन् । बुवाआमा दुबै भारतीय हुँदा पनि तिमी किन विदेशी जस्ती भयौ ? भनेर सोधिरहन्छन् । कक्षामा शिक्षकले भन्छन्, स्लिभलेस पहिरन नलगाउ, मानिसको नजर पर्छ ।कहीँ घुम्न जाँदा विदेशी भनेर उनीसँग सेल्फी खिच्न आउनेहरु पनि हुन्छन् । उनले हिन्दी बोलेको सुन्दा मानिसहरु विदेशीले पनि फरर्र हिन्दी बोलेको भनेर अचम्म पर्छन् ।
← पुलिस चौकीमा ढेंडु बाँदरलाई जागिर !
रोबोटमाथि लाग्यो उत्पीडनको आरोप, जागीरबाट बर्खास्त →